के निको भइसकेका व्यक्तिमा फेरि कोरोना संक्रमण देखिन सक्छ ? - समाचार - कान्तिपुर समाचार
वैशाख १३, २०७७ बुनु थारु
काठमाडौँ — कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड–१९ को संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दैछ । संक्रमितसँगै निको हुनेको संख्या पनि बढिरहेको छ । विश्वभर शनिबार बिहानसम्म संक्रमितको संख्या करिब २८ लाख पुगेको छ । जसमा निको हुनेको संख्या झन्डै ८ लाख रहेको छ ।
नेपाल पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणमा अछुतो छैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबारसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या ४९ रहेको छ जसमा ११ जना निको भएर घर फर्किएका छन् । संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले गरेको लकडाउन अवधिको बिहीबार एक महिना पुगेको छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वको सबै ठाउँमा पुगिरहँदा यसको रोकथाम तथा नियन्त्रण कसरी होला भन्ने सबैको चासो रहेको छ । विश्वका ठूला राष्ट्रहरुले विभिन्न अनुसन्धान तथा अध्ययन गरिरहेका छन् । अमेरिका, बेलायतलगायतका देशहरुले खोप र औषधिहरु परीक्षण गरिरहेका छन् । यसैले पनि रोगको निदानको लागि आशा बढाएको छ ।
कोरोना संक्रमण भएर निको भइ घर फर्किएका वा हामी आम मानिसलाई कोरोनाको पुन: संक्रमण हुन्छ र? भन्नेमा जिज्ञासा हुन सक्छ ।
निको भइसेकाकालाई कोरोना संक्रमण हुन सक्छ या सक्दैन भन्ने विषयमा विभिन्न अध्ययनहरु भएका छन् तर यथेष्ट प्रमाण भने भेटिएका छैनन् । अमेरिकाको नेसनल इन्स्टिच्युट अफ एलर्जी एन्ड इन्फेक्सियस डिजिजका निर्देशक एन्थोनी फौसीले एक पत्रिकासँगको अन्तर्वातामा भनेका छन्, ‘जो मानिस कोभिड १९ बाट निको भइसकेका छन् उनीहरुमा सामान्तया केही महिनासम्म रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास भएको हुनुपर्छ ।’
अनुसन्धानकर्ता तथा जनस्वास्थ्य अधिकारीहरु अझै पनि सार्स भाइरसविरुद्ध मानिसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताले कस्तो प्रतिक्रिया दियो र कोभिड–१९ बाट निको हुँदा दिगो रुपमा रोग प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित हुन्छ या हुन्न भन्नेमा अनभिज्ञ छन् ।
केही समय पहिले दक्षिण कोरियाली एक रिपोर्टका अनुसार कोरोना संक्रमित भएर निको भएकालाई पनि फेरि पछि कोरोनाकै लक्षणहरु देखा परेको थियो । त्यसैगरी कोरोना भाइरसको इपिसेन्टर मानिएको चीनको वुहानमा पनि पुन: संक्रमण देखिएको भन्ने खबर आएका थिए । साउथ चाइना मोर्निङ पोस्टका अनुसार १० प्रतिशतसम्म परीक्षणका क्रममा कोरोना नेगेटिभ देखिएकामा पनि चीनमा पुन: संक्रमण देखिएको थियो । तर वैज्ञानिकहरुका अनुसार भाइरस पुन: देखिनु असम्भाव्य हो ।
फेबु्रअरीको अन्तिमतिर एक ४० वर्षीया महिलामा कोरोनाको उपचार गराएर घर फर्किएको १० दिनमा फेरि पोजिटिभ पाइएको थियो । उनी जापानको ओसाकाको एक हेल्थकेयर सेन्टरमा उपचार गराएर फर्किएकी थिइन् । त्यसैगरी जियांग्सु प्रान्तका एक चिनियाँ व्यक्ति पनि निको भएर घर फर्किएको ३ दिनपछि फेरि संक्रमण देखिएर भर्ना भएका थिए । पुन: संक्रमण देखिए पनि यो संख्या एकदमै न्यून रहेको छ ।
मेडिकल न्‍युज टुडेका अनुसार यिनिहरुलाई किन दोस्रोपटक कोरोना पोजिटिभ देखियो भन्न कठिन छ । जहाँसम्म सम्भावनाको कुरा गर्ने हो भने लक्षणहरु देखिन छाडिसकेपछि पनि शरीरमा डिटेक्टेबल मात्रामा भाइरसहरु रहन सक्छ ।
विश्व स्वास्थय संगठनले अहिलेसम्म निको भइसकेकोलाई पनि किन संक्रमण देखिन सक्छ वा सकिँदैन भन्ने कुनै ठोस प्रमाण नभेटिएको जनाएको छ । छिट्टै पुन: संक्रमण किन भएको भन्ने बारेमा अनुसन्धानकर्ता तथा वैज्ञानिकहरु कोभिड–१९ नयाँ भाइरस भएकाले यसको व्यवहारबारे बुझ्‍न धेरै समय तथा अध्ययन चाहिने बताएका छन् । संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदी भन्छन्, ‘कोरोना नेगेटिभ पाइएकाहरुले छिट्नै नै पोजिटिभ टेस्ट देखिएको भन्ने यकिन जानकारी छैन, यसका बारेमा अझै धेरै अध्ययन आवश्यक देखिन्छ ।’
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोगका क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक तथा सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार केही देशमा पुन: संक्रमणका घटना देखिए पनि अहिले नै यसको कारण के हो भनेर यकिनका साथ भन्न नसकिने बताए । उनी भन्छन्, ‘लाखौँ मान्छे निको भएर घर फर्किएका छन्, केहीलाई यस्तो भएको होला तर फेरि भाइरस फर्कियो भनेर कम सुनिएको छ । परीक्षण गर्दा पनि केही फरक पर्न सक्छ होला । अनुसन्धान हुन जरुरी छ ।’
डा. पुनका अनुसार रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता व्यक्तिले विकास गर्ने भएकाले त्यो मानिसमा दोस्रो पटक संक्रमण हुनुहुँदैन । त्यसैको आधारमा खोपहरु विकास भइरहेका होलान् ।
माथिका पुन: संक्रमित भएकामा अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि फेरि परीक्षण गरिएको हो । साउथ चाइना मोर्निङ पोस्टका अनुसार यसरी पुन: संक्रमित हुनु परीक्षण विश्वसनीय नभएर हुन पनि सक्छ जसले भाइरलाई राम्ररी डिटेक्ट गर्न सकिरहेको छैन ।
फ्रेन्च रिसर्च इन्स्टिच्युटका भाइरोलोजिस्ट ओलिभियर टेरियर भन्छन्, ‘भाइरसको कन्सन्ट्रेसन यी मानिसमा निकै नै कम भएको हुनुपर्छ जसले गर्दा परीक्षणमा डिटेक्ट भएनन् र फेरि देखिन पुग्यो ।’
बर्मिङ्घम युनिभर्सिटीको इन्स्टिच्युट अफ माइक्रोबायोलोजी एन्ड इन्फेक्सनका प्राध्यापक रोबिन मे भने यस विषयमा यस्तो तर्क राख्छन्, ‘भाइरस संक्रमण बेला बिरामीको शरीरमा एन्टिबडी विकास हुन्छ जुन संक्रमण गराएको भाइरससँग सम्बन्धित हुन्छ । उनीहरु जब निको हुन्छन् , एन्टिबडी हराइसकेको हुँदैन ।’ उनी भन्छन्, ‘यी मानिसमा पुन: संक्रमण देखिनु कारण उनीहरुको शरीरमा केही मात्रामा भाइरस छुटेको हुनुपर्छ ।’
पुन: संक्रमण देखिनुको अर्को कारण हुन सक्छ शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता । भाइरोलोजिस्ट ओलिभियरका अनुसार यसरी पुन: संक्रमित देखिनुमा ती मानिसहरुमा रोग प्रतिरक्षा प्रणालीमा समस्या भएको हुुनुपर्दछ । त्यसैले उनीहरुले सही एन्टिबडी निर्माण गरेनन् । यसमा अझ धेरै अध्ययनको आवश्यकता रहेको उनी बताउँछन् ।
इम्पेरियल कलेज लण्डनमा भ्याक्सिनोलोजी विषयमा सिनियर क्लीनिकल रिसर्च शोधकर्ता रहेकी कट्रिना पोलक बीबीसीसँगको कुराकानीमा भन्छिन्, ‘यदि तपाईंमा यस प्रकारको संक्रमण देखिएको छैन भने तपाईंको प्रतिरक्षा प्रणालीले पहिलो प्रतिक्रियाका साथ प्रतिक्रिया जनाउँछ । जुन गैरविशिष्ट प्रतिरोधात्मक क्षमता हो, जसले संक्रमण रोक्न सहयोग पुऱ्याउँछ । तपाईंले कस्तो प्रतिरक्षा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईको आहार, तपाईंको आनुवांशिक पृष्ठभूमि र नयाँ संक्रमणसँग जुध्न सक्ने प्रतिरोधात्मक क्षमतामा निर्भर हुन्छ । यो कुरा हाम्रो स्वास्थ्य तथा उमेरले फरक पार्ने गर्दछ ।’
स्पेनका जैविक प्रविधिसम्बन्धी राष्ट्रिय केन्‍द्रका भाइरोलाजिस्ट लुई इन्वानेसका अनुसार कम्तीमा १४ प्रतिशत बिरामीमा कोरोनाको पुन: संक्रमण देखा परेको छ । उनी भन्छन्, ‘यो फेरि सङ्क्रमण नभई पुरानै भाइरस फेरि बल्झिएको हो कि !’ उनका अनुसार रोग प्रतिरोधी क्षमता घट्दा शरीरमा रहेका भाइरस बल्झिन सक्छ ।
अध्ययनकर्ताहरु अझै पनि इम्युन सिस्टमले कोरोना भाइरसँगको विरुद्धमा कसरी प्रतिक्रिया जनाउँछ भनेर थाहा पाइसकेका छैनन् साथै निको भएकालाई पनि पुन: किन देखिन्छ भनेर यकिनका साथ भन्न सकेका छैनन् । विज्ञहरुका अनुसार सावधानी अपनाउन फिजिकल डिस्टेन्सिङ र सेल्फ क्वारेन्टाइन नै उत्तम उपाय हो ।
प्रकाशित : वैशाख १३, २०७७ १२:३४
चीन-नेपाल मैत्रीका उपलब्धि प्रशस्त छन्
वैशाख १३, २०७७ होउ यान्छी
अप्रिल २५ का दिन नेपालमा ८.१ रेक्टर स्केलको महाभूकम्प गएको थाहा हुनासाथ म र मेरा सहकर्मीहरु तुरुन्तै उद्धार कार्यमा जुट्न थालेका थियौँ । सबैजना दिनरात नभनी काममा व्यस्त रह्यौं, सबैको मनमा एउटै कुरो मात्र थियो- जसरी हुन्छ अत्यावश्यक उद्धारकर्मीहरु र सामग्रीलाई यथाशीघ्र नेपाली जनता कहाँसम्म पुर्‍याउने । हामी घाइतेहरुको उद्धारगरी प्राण जोगाउनका लागि समयसँग बाजी थापेर दौड्दै थियौं, प्राकृतिक प्रकोपसँग संघर्ष गर्दै देशको पुनर्निर्माणमा जुट्न लागेका थियौं ।
ठूलो मेहनतपछि चीनको अन्तरराष्ट्रिय उद्धार टोली महाभूकम्पको भोलिपल्ट नै पहिलो ठूलो अन्तरराष्ट्रिय उद्धार टोलीको रुपमा काठमाडौं आइपुग्यो । र, दुई घाइतेहरुलाई जीवितै उद्धार गर्न सफल भयो । करिब १४ करोड य्वीयान् रेन्मीन्पी मूल्य बराबरको तीनपटकमा संकटकालीन मानवतावादी राहत सामग्रीहरु पनि हवाइ मार्गबाट छिटै नेपाल आइपुग्यो । चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रका न्यालम र केरुङ काउन्टीका भवन र बाटाहरु भूकम्पमा परी बिग्रिएको अवस्थामा पनि चीन सरकारले पठाएको चिनियाँ सशस्त्र प्रहरीको यातायात सैन्य टोलीले आफ्नो ज्यानको परवाह नगरी अतिशीघ्र चीन नेपालबीच जीवनको मार्गको रूपमा रहेको अरनिको राजमार्ग खुलाउने कार्य सम्पन्न गर्‍यो । र, सबैभन्दा बढी आवश्यक परिरहेको पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्य सामग्री, औषधि आदि सामानहरू नेपालमा पुर्‍यायो । चिनियाँ जनताले स्वस्फूर्त रुपमा चीनस्थित नेपाली राजदुतावासमार्फत् राहत सामग्रीहरु र आर्थिक सहयोग प्रदान गरे । नेपालमा कार्यरत चिनियाँ कम्पनीहरु र चिनियाँ नागरिकहरुले पनि उद्धार र राहत कार्यमा जुटी स्थानीय बाटोघाटोको मर्मत र संचार व्यवस्थाको पुनर्स्थापनामा सहयोग गरेका थिए ।
संकटकालीन उद्धारकार्य पूरा भएपछि नेपाली जनताले महाभूकम्प पछिको कठिन पुनर्निर्माण कार्य प्रारम्भ गरे । यसकार्यमा चीन पहिलेदेखि नै सक्रिय रुपमा सहभागी हुँदै आइरहेको छ । तात्कालीन चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्री, वर्तमान स्टेट काउन्सिलर तथा परराष्ट्र मन्त्री वाङ यीले चीन सरकारको प्रतिनिधित्व गरी नेपाल पुनर्निर्माण अन्तरराष्ट्रिय बैठकमा भाग लिनु भएको थियो । सन् २०१६-२०१८ मा चीनले नेपाललाई ३ अर्ब य्वीयान् रेन्मीन्पी अनुदान दिने घोषणा गर्नु भएको थियो । दुई देशबीच आधारभूत संरचनाहरु, भूकम्पपश्चात् पहाडी क्षेत्रमा जनजीवनको पुनर्व्यवस्था, सांस्कृतिक सम्पदाहरुको मर्मत सम्भार, प्राकृतिक प्रकोप रोकथाम र नियन्त्रण क्षमता निर्माण र स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवा, यी पाँच क्षेत्रमा २५ वटा भूकम्प पश्चात् पुनर्निर्माण परियोजना निर्धारण गरी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर पनि गरिएको थियो । चीन र नेपाल दुई देशका जनताले आफ्ना आस्था र इच्छाशक्तिलाई आधार बनाई देशमा भएका भौतिक संरचनाको विनाश, 'नाकाबन्दी' आदि कठिनाइलाई पन्छाउँदै स्थीर गतिमा ती परियोजनाहरुलाई अगाडि बढाइरहेका छन् ।
सन् २०१८ को अन्तमा म नेपालका लागि राजदूत नियुक्त भएँ । मलाई नेपाली राष्ट्रिय नेताहरुको साथमा चीनको सहयोगमा सञ्चालित भूकम्पपश्चात् पुनर्निर्माणका परियोजनाहरुको निरीक्षण गर्ने सौभाग्य धेरैपटक मिलेको छ । खुशीको कुरा, काठमाडौं सहरको फराकिलो चक्रपथको स्तारोन्नतिको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । त्यसबेला मलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सम्पन्न भएको परियोजना हस्तान्तरण कार्यक्रममा सहभागी बन्ने सौभाग्य मिलेको थियो । सुन्दर नौतल्ले दरबारको पहिलेको जस्तै आकर्षक रुपमा पुनर्निर्माणको कार्य हुँदैछ । सफा सुग्घर दरबार हाइस्कूल (भानुभक्त माध्यमिक विद्यालय) विद्यार्थीहरुको अध्यापनका लागि तयार भइसकेकोछ । महाभूकम्पको समयमा ठूलो संख्यामा घाइतेहरुको उपचारमा संलग्न भएको निजामति अस्पतालको दोस्रोचरणको निर्माण भइरहेको छ । तातोपानी सीमा क्षेत्र निरीक्षण कार्यालय तथा चीन नेपाल मैत्री साँघु र रसुवा पूलको पुनर्निर्माण भई त्यसबाट गाडी पनि चल्न थालिसकेको छ । हामीहरुले एकसाथ दिनरात नभनी मेहनत गरेका सबै परियोजनाहरुको राम्रो प्रगति भइरहेको छ । कुनै परियोजना नै पूरा भइसके भने कुनै अझै चलिरहेका छन् । ती परियोजनाहरुमा मैले दुई देशका कामदारहरु काम गरिरहेका देखेकी छु । उनीहरु पसिना बगाएर घरआँगन अनि देशको पुनर्निर्माणमा जुटिरहेका छन् । हाम्रो मैत्रीको उल्लेखनीय उपलब्धिहरु हासिल भइरहेका छन् । महाभूकम्पको कठिन परीक्षाबाट उतिर्ण भएको चीन नेपाल मैत्री हाम्रा दुई देशका जनताहरुको अन्तर्मनसम्म पुगिसकेको छ । र, हाम्रो बहुमूल्य साझा सम्पति बनिसकेको छ ।
विगतका पाँच वर्ष नेपालले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा महत्वपूर्ण प्रगति गरेका वर्ष हुन् । चीन र नेपालबीचको आपसी सहयोगका पाँच वर्ष हुन् । अझै भन्ने हो भने दुई देशको सम्बन्ध र विविध क्षेत्रमा भएका सहयोग सहकार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढेका पाँच वर्ष हुन । पोहोर साल चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन् फीङ र नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सफलतापूर्वक आपसी देशहरुको भ्रमण गर्नुभयो । दुई देशले विकास र समृद्धीतर्फ उन्मुख हुने पुस्तौंपुस्ताको मैत्रीपूर्ण रणनीतिक सहकार्य साझेदारी सम्बन्ध स्थापना गरे । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन् फीङले नेपाल भ्रमणको बेलामा सन् २०२०-२०२२ मा चीनले नेपाललाई भूकम्प पश्चात्को पुनर्निर्माण, आर्थिक, सामाजिक, जनजीवन क्षेत्रको विकासमा एकमुष्ट आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने योजनाको घोषणा गर्नु भएको थियो ।
नेपालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सबै क्षेत्रको हो । चीनले नेपालको पर्यटन व्यवसायको विकासका लागि सक्रिय भूमिका खेलेको छ, सीधा हवाइमार्गहरु खोल्न उत्प्रेरित गरी दुई देशबीचको उडान प्रतिहप्ता ६० वटा पुर्‍याउन पनि सहयोग गरेको छ । चीन नेपालको दोस्रो प्रमुख पर्यटक स्रोत मुलुक बनिसकेको छ । नेपाल आई हिमालयको सौन्दर्य रसास्वादन गर्ने तथा बु्द्धको जन्मभूमिमा पुगी प्राचीन संस्कृतिको अनुभव गर्ने चिनियाँहरुको संख्या झनझन् बढ्दैछ । चिनियाँ कम्पनीहरु वित्तीय लगानी, निर्माण ठेक्का आदि माध्यमबाट नेपालको राजमार्ग, विमानस्थल, जलविद्युत् सुरुङ आदि आधारभूत संरचनाको निर्माणमा सक्रिय रुपमा सहभागी हुँदै नेपालको पुनर्निर्माण तथा विकासमा सम्पूर्ण रुपले सहभागी भई 'समृ्द्ध नेपाल, सुखी नेपाली'को लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहयोग गरिरहेका छन् ।
महाभूकम्पको पाँचौँ वर्षको स्मृति दिवसको अवसरमा म महाभूकम्पमा परी आफ्नो प्राण गुमाउनु भएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरुप्रति पुन: श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु । कुनै दु:ख कठिनाइसँग नहारी देशको पुनर्निर्माणमा जुटेका नेपाली जनताप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु । र, नेपालको भूकम्पपश्चातको पुनर्निर्माणमा सहभागी हुनु भएका दुवै देशका प्राविधिकहरुप्रति हार्दिक धन्यबाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु ।
अहिले कोरोना भाइरसको महामारी विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको छ । सम्पूर्ण मानवजातिको साझा शत्रुको सामना गर्न चीन र नेपालका जनताहरुले पुन: काँधमा काँध मिलाई एकआपसमा सहयोग गरी महामारीविरुध्द लड्नु पर्दछ । आपतको बेलामा साँच्चैको मित्रको पहिचान हुन्छ र मैत्री पुस्तौंपुस्तासम्म रहन्छ । मानवजातिको साझा भाग्यको समष्टिको संयुक्त रुपमा निर्माण गर्ने धारणा अन्तर्गत चीन र नेपाल दुई देश एकसाथ अझ सुन्दर भविष्यतर्फ अगाडि बढ्दै जाऔं ।
-लेखक नेपालका लागि चीनकी राजदूत हुन् ।